गोरखापत्र अनलाइन माघ २८, २०७८ शुक्रबार
विज्ञानले कारण र असरको व्याख्या गर्दछ । सत्यको खोजी गर्दछ । विज्ञानका आविस्कारले नै मानव समुदायले विगतमा भन्दा धेरै सुख सुविधा प्राप्त गर्न सफल भएको छ । महामारी र रोगलाई परास्त गर्न सकेको छ । आयु बढेको छ ।
विश्वमा भएका नयाँ–नयाँ आविस्कार कुनै न कुनै व्यक्ति तथा व्यक्तिको समूहले गरेका सिर्जनात्मक तथा रचनात्मक कार्यका परिणाम हुन् । व्यक्तिका सिर्जनात्मक तथा रचनात्मक कार्यले गर्दा समाजलाई सभ्यतातर्फको यात्रामा अगाडि बढाउन मद्दत गरेका छन् । सिर्जनात्मक सोचलाई निश्चित संरचनाबाहिरको सोचाइ, सीमाभन्दा बाहिर गएर गरिएका विचार तथा प्रचलित मान्यतालाई चुनौती दिने कार्य पनि भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि नयाँ वस्तु सिर्जना गर्न...
गोरखापत्र अनलाइन मंसिर २३, २०७८ बिहीबार
एक दिन म शिक्षकको घरमा पाहुना हुन पुगेको थिए । उहाँ प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । उहाँको छोरा कक्षा चारमा अध्ययन गर्ने । बेलुकी खाना खानुभन्दा पहिला परिवारका सदस्यसँगै म पनि गफगाफमा थिएँ । शिक्षकको छोराले गफगाफमा ध्यान नदिएर पुस्तक पढिरहेका थिए ।
आज धेरै वर्षपछि कालुङ्खोला किनारको एउटा ढुङ्गामा बस्न पुगेँ । खोला किनारको च्याप्टो परेर सुतेकोे ढुङ्गा खोज्यो मनले । आमाले तामाको ताउलोमा खरानीको बाहानमा पकाएका कपडाहरू पछारी पछारी धुने त्यही ढुङ्गा थियो । त्यतिबेला साबुनले धुने कपडा त निकै कम थिए, बा र हजुबाका ढाकाटोपी अनि हाम्रा दुई–चरावटा ट्यार्लिङका कपडा मात्र । हामी केटाकेटीलाई आमाको नजिक–नजिक पुगेर खोलामा खेल्न निकै रमाइलो हुन्थ्यो । जहाँ आमा, मायाकी...
शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा तथा जनशक्ति विकासका लागि छुट्टाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । धेरै स्थानीय तह र प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रको योजनाबद्ध सुधार प्राथमिकतामा नै परेको छैन भने केही स्थानीय तह शिक्षामा सुधार गर्न के गर्दा सम्भव हुने हो ? सीमित साधन स्रोतलाई...
जनप्रतिनिधिमध्ये सबैभन्दा नजिकका, आफ्ना समस्या सुनाउन सकिने भनेका वडा समितिका सदस्यहरू हुन् । वडा समिति घरको हात्तीपाइले जस्तै सरकारको मात्र होइन लोकतन्त्रको पनि जग हो । समुदायका धेरै व्यक्तिलाई सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम, सञ्चालित कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नहुन सक्छ, वडाबाट प्रवाह हुने सेवा भने लिइरहेका हुन्छन् । वडा समितिका कार्यहरू जीवन पद्धतिसँग जोडिएका हुन्छन् । सामान्य मान्छेलाई ठूला ठूला केन्द्रीय...
गोरखापत्र अनलाइन फाल्गुन १४, २०७७ शुक्रबार
अपेक्षित लक्ष्य, उद्देश्य तथा नतिजा प्राप्त गर्न गरिने कार्यको पूर्वनिर्णय नै योजना हो । योजना निर्माण गर्दा निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न विकल्पको चयन गर्ने, आवश्यक स्रोत–साधन व्यवस्था गर्ने, समयसीमा निर्धारण गर्ने कार्य गरिन्छ । योजनाले लाग्ने खर्च, स्रोत–साधनको दुरुपयोग र अनिश्चिता घटाउँछ भने सहयोग, सहकार्य र लक्ष्य प्राप्तिको सुनिश्चितता बढाउँछ । भनिन्छ– योजनाविहीन गरिएको कार्य अन्धकारमा ढुङ्गा फाल्नुसरह हो...
गोरखापत्र अनलाइन माघ १३, २०७७ मंगलवार
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार तथा दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संविधानको मर्मअनुसार शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु भनेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थित गर्न आवश्यक ऐन, नियम निर्माण गर्ने, स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, शैक्षिक योजना र पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने तथा परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, प्रमाणपत्र जारी गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रमको समीक्षा तथा अध्ययन,...
गोरखापत्र अनलाइन पुष ११, २०७७ शनिबार
ति पो भयो र– कटुवालले घोक हाली ‘लौ आज बाटो खन्न सबै कुरियाबाट एक–एकजना ठूलो चौतारामा जम्मा हुनू है’ भनेको । विद्यालयका लागि श्रमदान गर्न होस्, सरकारी अड्डाबाट विशेष काम लिएर आएको व्यक्तिको सूचना पु¥याउन होस् वा बालबालिकालाई खोप लगाउन किन नहोस्, सबैलाई सूचना गर्ने माध्यम कटुवाल नै थिए त्यतिबेला । अहिलेका बालबालिकाले कहाँबाट सुन्न पाउनु त्यस्तो कटुवालको सन्देश । हुलाकीले झोलामा चिट्ठीको पोको बोकेर गाउँ तथा टोलमा...
शिक्षाले मानवीय मूल्य–मान्यता संरक्षण गर्छ । शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू आदर्श, नैतिकवान, विवेकशील, सामाजिक भावना भएका नागरिक तयार हुन्छन् भन्ने ठानिएको हुन्छ तर व्यवहारमा उच्च शिक्षा लिएका व्यक्तिहरू पनि त्यसको विपरीत भएका देखिन्छन् । राष्ट्रले एककिसिमका नागरिक तयार पार्ने भनेर ठूलो लगानी गर्छ तर किन त्यसको विपरीतका नागरिक तयार हुन्छन् ? अध्ययनको विषय भएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरूमा...